ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ လွှတ်တော်က ပါဝင်ကြိုးပမ်းမည် ဟု ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်း ပြောကြား | Pyithu Hluttaw
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ လွှတ်တော်က ပါဝင်ကြိုးပမ်းမည် ဟု ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်း ပြောကြား
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့တွင် ကျင်းပလျက်ရှိသည့် (၁၂၉)ကြိမ် မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပါလီမန်များ သမဂ္ဂညီလာခံ ဒုတိယနေ့ အစည်းအဝေးကို အောက်တိုဘာ ၈ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်း ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါမျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေး အစီအစဉ်(၆)တွင် “ဓာတုလက်နက်များ အသုံးပြုမှုတားဆီးရေးနှင့် ဖျက်ဆီးရေးတို့ကို ကြီးကြပ်ရာတွင် လွှတ်တော်များ၏ အခန်းကဏ္ဍခေါင်းစဉ်ပါ အရေးပေါ် အစီအစဉ်” နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယကက ထောက်ခံပြောကြားရာတွင် မိမိအနေဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယကနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်များကို ယူပြီးနောက် (၁၂၉)ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပါလီမန်များ သမဂ္ဂညီလာခံသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် တက်ရောက်ရသဖြင့် ဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွှတ်တော်များ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်ပြီး ညီလာခံကို အသိပေး လိုပါကြောင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပ ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းစဉ်တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် တက်ကြွစွာ ပါဝင်လျက် ရှိပါကြောင်း။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် နိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လုပ်ငန်း စဉ်တွင် ပါဝင်ဆောင် ရွက်ရုံမျှမက ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက်လည်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း။
လွှတ်တော်များအနေဖြင့် လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီမည့်ဥပဒေ များပြင်ဆင်ခြင်း၊ အသစ်ရေးဆွဲခြင်း စသည့် ကြီးလေးသောတာဝန်များလည်း ရှိပါကြောင်း။
ထို့အပြင် ပြည်သူများ၏ အသံကို ကြားနိုင်ရန်၊ ပြည်သူများ၏ လိုအပ်ချက်ကို နားလည်ရန်နှင့် ပြည်သူများအကြား ဒီမိုကရေစီရေးကို အသိပညာမြှင့်တင်ပေးရန် လွှတ်တော်ရပ်နားချိန်များတွင် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များသည် ပြည်သူများထံ အရောက်သွားသည့် အစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါကြောင်း၊ တွေ့ရှိရသော လိုအပ်ချက် များကို လွှတ်တော် သို့တင်သွင်းပြီး သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ် မှုပိုင်းဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ သိရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပါကြောင်း။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ဒီမိုကရေစီ တန်ဖိုးမြှင့်တင်ရန်အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပါလီမန်များသမဂ္ဂ၏ ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍအတွက် တန်ဖိုးထားပါကြောင်း။
၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ပါလီမန်များသမဂ္ဂ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပြန်လည်ဝင်ရောက် ပြီးကတည်းက မြန်မာလွှတ်တော်များအတွက် သမဂ္ဂ၏ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု အစီ အစဉ်များသည် များစွာအကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်ထွန်းစေပါကြောင်း၊ ညီလာခံမျက်နှာ စုံညီအစည်းအဝေးတွင် အရေးပေါ် အစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးချက်များသည် အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီး နိုင်ငံ တကာပါလီမန်များက တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သောကိစ္စရပ်များ အပေါ်ထားရှိသည့် သဘောထား အမြင်များကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် အခွင့်အလမ်းရရှိစေပါကြောင်း၊ ညီလာခံ၏ကော်မတီနှင့် ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲများမှ ဘာသာရပ်များသည်လည်း မိမိတို့လွှတ် တော်အတွက် များစွာအသုံးဝင်ပါ ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒသည် နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်း ရေးနှင့်လုံခြုံမှုကို ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ရာတွင် တက်ကြွစွာပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် လက်နက်ဖျက် သိမ်းရေးကို အစဉ်တစိုက်ထောက်ခံပြီး လက်နက်များအပြိုင်အဆိုင် တပ်ဆင်မှု၊ တရားမဝင်ထုတ်လုပ် ရောင်းဝယ်မှုများကို ဆန့်ကျင်ပါကြောင်း၊ ၁၉၉၃ ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံသည် ဓာတုလက်နက်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး အတည်ပြုချုပ်ဆိုရန် ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ ဓာတုလက်နက်များ အသုံးပြုမှု တားဆီးရေးနှင့် ဖျက်ဆီးရေးတို့ကို ကြီးကြပ်ရာတွင် လွှတ်တော်များ၏ အခန်းကဏ္ဍခေါင်းစဉ်ပါ အရေးပေါ် အစီအစဉ်ကို ညီလာခံမှာ ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးရန် မြန်မာကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့က ထောက်ခံမဲပေးခဲ့ပါကြောင်း၊ ဓာတုလက်နက်အသုံးမပြုရေး၊ ဖျက်သိမ်းရေးအပါအဝင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း လက်နက်ဖျက်သိမ်း ရေးကို ဆက်လက်ပြီး လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရန် ကိစ္စကို မြန်မာနိုင်ငံ လွှတ်တော်က ပါဝင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယကသည် အောက်တိုဘာ ၈ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ အထက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr.John Hogg နှင့် လည်းကောင်း၊ အီရန်နိုင်ငံ ပါလီမန်ဥက္ကဋ္ဌ H.E.Mr.Ali Larijani နှင့် လည်းကောင်း၊ တောင်အာဖရိက နိုင်ငံလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E.Mr. M.V. Sisulu နှင့် လည်းကောင်း သီးခြားစီတွေ့ဆုံ၍ နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာများ၊ လွှတ်တော်ရေးရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ (သတင်းစဉ်)